အင်တာနက်ခတွေ စျေးတက်ကုန်ပြီဆိုတော့ ဒေတာစားသက်သာတဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေ ဖတ်ထားပါ – Shwe Thadin
အင်တာနက်ခတွေ စျေးတက်ကုန်ပြီဆိုတော့ ဒေတာစားသက်သာတဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေ ဖတ်ထားပါ
10/12/2021 T Z Knowledge, Tech & Science 0
Mobile data ဖုန်း အင်တာနက်တွေ ဈေးတိုးမြှင့်လိုက်တဲ့ သတင်းတော့ အားလုံး သိပြီး ကြပြီ ထင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် ဆိုတာတော့ ကာယကံရှင် ကြင်စိုးတို့ပဲ သိမယ် ဆိုပေမဲ့ မပြေးသော် ကန်ရာရှိ ဆိုသလို Digital Strike နဲ့ သတင်းစီးဆင်းမှုတွေကို တားဆီးချင်လို့ လို့ပဲ မှတ်ယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကြည့်မြင်တိုင် ပန်းပင်နီလမ်းက အဖြစ်အပျက် ဗီဒီယိုဖိုင်မျိုးဆို အင်မတန် အထိနာခဲ့တယ် ပြောရမှာကိုး ။
Wifi ကလည်း တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာအားဖြင့်တော့ မလွှမ်းခြုံနိုင်တာမို့ Mobile data ကို စီစီစစ်စစ်နဲ့ သုံးနိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီအတွက် လေ့လာမိသလောက် အကြံပြုလိုတာက..
၁။ အင်တာနက်ကို Package နဲ့ သုံးပါ။ ဒီအတိုင်း သုံးတာက အကုန်အကျ ပိုများပါတယ်။…
၂။ Package ဝယ်ဖို့က တစ်လကို ကိုယ် ဒေတာပမာဏ ဘယ်လောက်သုံးလဲ ပေါ် မူတည်ပြီး ဝယ်မယ်ဆို ပိုအဆင်ပြေတယ်။ မသုံးနိုင်ဘဲ ပိုဝယ်ထားမိတာမျိုး မဖြစ်တော့သလို တစ်လ တစ်လ ကိုယ့်ရဲ့ ဖုန်းဘေလ်ကုန်ကျစရိတ်ကိုလည်း ချိန်လို့ ရသွားမယ်။ အရင်က တစ်လ ၂ သောင်း ကုန်တယ်၊ အခု ၃ သောင်းဆို ပိုလာတဲ့ ၁ သောင်းအတွက် ဘယ်နေရာကနေ လျှော့လို့ ရမလဲ ဆိုတာ စဉ်းစားလို့ ရသွားမှာ ဖြစ်တယ်။ (ဥပမာ အစားအသောက် မှာစားတာ)…
နောက်ပြီး Digital Strike နဲ့ သတင်းစီးဆင်းမှုက ရပ်လို့ မဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ့်ရဲ့ Entertainment အတွက် သုံးတဲ့ တခြားဟာတွေ (ဥပမာ Netflix, Game တွေ) ကို နည်းနည်းလျှော့လို့ ရသွားပါမယ်။….
၃။ Bonus တွေကို စောင့်ကြည့်ပါ။ ဒါမှ များများသုံးနိုင်လိမ့်မယ်။….
၄။ Application Update တွေကို Wifi ရှိတဲ့နေရာမှ လုပ်ပါ။ ဒီအတွက် App တွေကို Auto-update မဖြစ်နေအောင် သေချာဝင်စစ်ကြည့်ပေးပါ။….
၅။ ဖေ့စဘွတ်သုံးတဲ့အခါ ကိုယ့်အတွက် အရေးတကြီး လိုအပ်တာကို ရှာဖတ်တဲ့ အလေ့အကျင့် လုပ်ပါ။ ဒီလိုပဲ scroll down လုပ်ပြီး သုံးတာက Data တွေကို ကုန်မှန်းမသိ ကုန်စေတယ်။ နောက်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ Favourite list (အရင်က See first) ကိုလည်း ပြန်စစ်ပါ။ ဆယ်လီတွေကို ထားထားမိရင် ခဏပြန်ဖြုတ်ပြီး NUG ရဲ့ ပေ့ချ်တွေ၊ C2D လို ပေ့ချ်တွေနဲ့ တခြားသတင်းဌာနတွေကို ဦးစားပေး ထားပေးပါ။….
ဒါဆို ဖေ့စဘွတ်ဖွင့်မယ်။ ဒီသတင်းတွေ ဖတ်မယ်။ ကိုယ်ဖတ်ချင်တဲ့ တချို့လူတွေရဲ့ စာတွေကို Search box ကနေ ရှာမယ်။ နည်းနည်းဖြစ်ဖြစ်တော့ ပွတ်မယ် (Scroll down လုပ်မယ်)။ ပြီးတာနဲ့ တခြားကလစ်လုပ်တာမျိုးတွေ၊ ကိုယ့်အတွက် လေ့လာသင်ယူစရာတွေကို ဦးစားပေး လုပ်မယ်။ ဒီလိုဆို ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။….
၆။ ဗီဒီယိုတွေမှာ Auto play ပိတ်ထားပါ။ ဒါဆို ကိုယ် Play ဆိုပြီး နှိပ်မှ ပွင့်မှာ ဖြစ်လို့ Data ကုန်တာ သက် သာပါတယ်။ Video resolution တွေလည်း ချထားပါ။…
၇။ ထပ်ကာ ထပ်ကာ ပြန်ကြည့်ဖို့ လိုတဲ့ သင်ကြားရေး ဗီဒီယိုတွေများ ဖြစ်နေရင် တစ်ခါတည်း Down ထားပါ။ YouTube, Netflix စတာတွေမှာလည်း အဲ့လို Download လုပ်ပြီး ကြည့်တာက ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။ (C2D က ဗီဒီယိုတွေကို ပြောခြင်း မဟုတ်ပါ။ ဥပမာ တရားတော်တွေ၊ သီချင်းတွေ၊ Workout video တွေ စသဖြင့် ကိုယ်နေ့တိုင်းကြည့်ဖြစ်နေမဲ့ video တွေကို ဆိုလိုပါတယ်။) …
ဒီလောက်ဆို အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ ခြွေတာပြီးသား ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ငွေကို စိစစ်ပြီး သုံးနေရသူတွေအတွက် အဓိက ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ဆင်းရဲချမ်းသာ ကွာခြားကြတာမို့ ဘယ်လိုဈေးတက်တက် သိပ်မသိသာဘူး ဆိုတဲ့သူတွေက Digital Strike မှာ များများပါဝင်ပေးပါ။ Wifi နဲ့ သုံးသူတွေ၊ နိုင်ငံခြားက လူတွေရောပဲပေါ့။….
ဒီတော်လှန်ရေးကာလတလျှောက်မှာ အကြပ်အတည်း အခက်အခဲပေါင်းများစွာ ကျော်ဖြတ်ခဲ့ကြရပါတယ်။ ငွေသားရှားပါးတဲ့ ပြသနာတွေ ကြုံခဲ့ရပြီးပြီ။ ကိုဗစ်ကြောင့်လည်း အသက်တွေ ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးပြီ။ ဒါပေမဲ့လည်း ပြည်သူတွေဟာ အင်နဲ့အားနဲ့ မမောနိုင် မပန်းနိုင် တော်လှန်နေကြဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Mobile data ဈေးတွေ မြှင့်လိုက်ရုံနဲ့သာ တော်လှန်ရေး အားနည်းသွားရမယ်ဆို ဒီလောက်ထိတောင် ခရီးရောက်လာခဲ့မယ် မဟုတ်ပါဘူး။….
စစ်ဖိနပ်အောက်က ရုန်းထွက်ချင်တဲ့ ကျနော်တို့ ပြည်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒကို ဘယ်အရာကမှ တားဆီးလို့ ရနိုင်တော့မှာ မဟုတ်လို့ ကြုံရသမျှ အခက်အခဲတိုင်းကို ဉာဏ် ပညာနဲ့၊ အချင်းချင်း ဖေးကူမှုတွေနဲ့၊ သူ လွတ်သွားတဲ့နေရာ ကိုယ်ဖြည့်၊ ကိုယ်လွတ်သွားတဲ့နေရာ သူဖြည့်ပေးပြီး စည်းလုံးမှုအပြည့်နဲ့ ကျော်ဖြတ်ကြရအောင်ပါ။…
Credit: ဒေါက်တာ ဖြိုးသီဟ (၉.၁၂.၂၀၂၁)
နောက်(၁)နှစ် (၂)နှစ်အတွင်း မင်္ဂလာဆောင်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိသူများ ယခုစာကို မဖြစ်မနေဖတ်သင့်
စကစအပေါ်ပြည်သူ‌တွေဘယ်တော့မှသွေးအေးမသွားဘူးဆိုတာကိုပြသလိုက်တဲ့ယနေ့ (Silent Strike) မြင်ကွင်းများ